comfortable – FemaleWear.net
ခရီးသွားရင် တစ်ထည်တည်းနဲ့အလွင့်ဖြစ်စေမယ့် ဖက်ရှင်လေးတွေ
အချစ်တို့ရေ ဖက်ရှင်ဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်း ကျချင် ကြတာပဲနော်။ အထာကျကျလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့။ အဲ့ထဲကမှခရီးတွေသွားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် ပစ္စည်းတွေထည့်ရမှာပျင်းတဲ့သူလေးတွေရှိတယ်လေ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အိတ်ထဲလည်း အရမ်း နေရာမယူတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးလေးတွေဆိုရင်ရော? အဲ့လိုအချိန်တွေ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေကိုရွေးချယ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလက်တို့ပေးချင်လို့ပါ။ ခရီးထွက်ရင်တော့ အလန်းလေးတွေဝတ်ချင်ကြတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အင်္ကျီတွေအများကြီး မထည့်ချင်တာရော ပြီးတော့ ခရီးထွက်ရင် တစ်စုံတစ်စုံလဲဖို့ကျတော့လည်း မလွယ်ဘူးလေ။…
အားလက်ရက်တွေမှာ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကမ်းခြေသွားဖို့ အစီစဉ်တွေဆွဲထားရဲ့လား? ကမ်းခြေသွားရင်ဘယ်လို style ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုရော စဉ်စားရခက်နေလား? ကမ်းခြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်စားတွေကို ဆောင်သွားရင်အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲကြခုန်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်စားဖြစ်ဖို့လိုသလို ရေထဲဆင်းလိုက်တက်လိုက် လုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အရမ်းထူတဲ့အဝတ်စားမျိုး မဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကမ်းခြေအတွက်…